Ku saabsan P&M → Dawaarka kumbuyuutar kumbuyuutareedka leh • Jumlo
Khibradda oo lagu daro xirfad-yaqaannimada
Warshadda tolida P&M waxaa la aasaasay 1995 magaalada Rawa Mazowiecka. Laga soo bilaabo 2003. waxaan bixinnaa adeegyo tolid, goyn, dhejis iyo calaamadeyn. Waxaan sidoo kale bixinnaa jumlo jumlo ah oo ah shaqeynta iyo xayeysiinta dharka.
Waxaan haynaa baarkin weyn oo casri ah oo qalabaysan, oo ay ku yaalliin:
Mashiinnada Qufulka oo wata gaadiid hoose - makiinado otomaatig ah
Mashiinnada Qufulka leh oo wata gaadiidka hoose iyo kan sare oo leh gogol ballaaran - mashiinno otomatik ah
Isku xir laba irbadood
3, 4 iyo 5 xargaha daboola
4-irbad iyo 12-cirbadood oo ay suurtagal tahay in tolidda lagu tolo
Xafaayadaha naasaha ku dhaca
Miisaska birta leh matoorrada uumi bixiya
Jarista miis qolka oo leh gogo '8,5, m m, mindi toosan iyo mindi bawdada
Waxaan danaynaynaa tayada ugu sarreysa ee alaabadayada
Qolkayaga tolidda wuxuu hubiyaa in badeecada aan soo saarno ay ka sameysan yihiin dharka ugu tayo sareeya oo leh tayo wanaagsan oo shaqeyneysa iyo farsamooyinka midabaynta iyo dhammeystiran. Waxaan awoodnaa inaan la kulanno qandaraasleyaasha aadka dalbaneysa annaga oo adeegsiga qalabka wax ku ool ah u adeegsan karno. Waxaan khibrad ballaaran u leenahay harqaanka, goynta iyo qaabeynta wakaaladaha xayeysiinta iyo magacyada caanka ah.
Macaamilku anaga ayaa noogu muhiimsan
Macaamiisha qanacsan ayaa ah mudnaantayada. Talooyinkooda wanaagsan waxay nagu dhiirrigelinayaan inaan si joogto ah u horumarinno una ilaalinno tayada sare ee adeegyadeena.
Shaqada iyo xayeysiinta dharka
Waxaan haynaa tiro ballaaran - in ka badan 6000 oo alaab ah, dharka shaqada i xayeysiinta ka soo saarayaasha la aqoonsan yahay ee qiimaha aadka u soo jiidashada badan. Kuwani waa, kuwo kale, funaanado, koofiyado, jaakad, shaati, dhogor, shaati polo, funaanado, dharka shaqada, dharka takhasuska leh, dharka caafimaadka, bakhaarada qabow iyo qaboojiyaha, iyo kabo kala duwan.
Xirashada kombiyuutarka / dharka xiro
Daabacaadda shaashadda / daabacaadda dharka